DAAWO MUUQAAL: M/weynaha Somaliland oo fariin u diray M/weynaha Puntland, kana codsaday sii deynta. – Puntlandtimes
HARGEYSA(P-TIMES)- Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlayay shalay magaalada Hargeysa ayaa fariin nabdeed u diray dhigiisa Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, oo uu sheegay in ay dhanka Hargeysa diyaar u tahay nabad iyo deris wanaag ay kula noolaato shacabka iyo dawladda Puntland.
Mr, Biixi ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin Is dhaafsiga Maxaabiista labada dhinac ku kala qabsadeen dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay deegaanka Tukaraq ee gobalka Sool, loona baahan yahay in talaabadaas ay fuliso Puntland.
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaan wali ka jawaabin dhawaaqa uga yimi Hargeysa, waxaana dadka Siyaasadda falanqeeya ay sheegayaan in ay Somaliland muujisay dabac weyn oo kuwajahan arrimaha xaduudaha kala dhaxeeya Puntland.
Dagaalo qaraar ayaa dhexmaray maamulada Puntland iyo Somaliland, kaas oo galaaftay nolosha in ka badan 100 Askari oo ah dhinacyadii dagaalamayay sannadkii hore, waxaana aan jirin dhinac horumar dagaal ka sameeyey, iyagoo mudo dheer ku muransan arrimaha gobalada Sool, Sanaag & Cayn.